Maxkamada CQS ee Maamulka Jubbaland oo la horgeeyey nin ku eedeysan dilka xaaskiisa… – Hagaag.com
Maxkamada CQS ee Maamulka Jubbaland oo la horgeeyey nin ku eedeysan dilka xaaskiisa…
Posted on 26 Abriil 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Maamulka Jubbaland ayaa la horgeeyay dacwad ka dhan ah C/laahi Asad Ismaaciil oo ku eedeysan in uu magaalada Kismaayo ku dilay 14-kii bishan April xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray Muxubo Maxamed Guure.
Dilkan ayaa ka dhacay xaafada Calanley ee magaalada Ksismaayo, xili habeen ah saacadu marka ay aheyd 08:00 fiidnimo, sida ay sheegtay Maxkamadda.
Guddoomiyaha maxkamadda darajada Koowaad ee ciidamada qalabka sida Jubbaland Bashiir Max’uud Xareed ayaa sheegay kiiskan maxkamadda la horkeenay in dib loo baari doono, wuxuuna tilmaamay in dib la isugu soo laaban doono 15-ka bisha May 2018, maadaama cadeymo ku filan la waayay.
“Maxkamadda maanta waxaa ay u fariisataya dhageysiga koowaad kiis Dil ah oo lagu soo eedeeyay C/laahi Asad Ismaaciil oo 28 sano jir ka tirsan Taliska ciidamada Jubbaland, markii aan dhageysanay Dacwada waxaa inoo cadaaday inaan la keenin cadeymo ku filan kiiskan, waxay xeer ilaaliyaha Maxkamadda fareysaa in uu keeno cadeyn ku filan kiiskan, dib ayaana la isugu soo laaban doonaa” ayuu yiri Gudoomiye Bashiir.
C/laahi Asad Ismaaciil ayaa Muxubo Maxamed Guure guursaday 15-kii bishii Janaayo 2018-ka, waxaana dhacdadan maalmihii dambe aad loogu hadal hayay baraha bulshada.
Falkan uu ku eedeysan yahay askarigan ayaa noqday mid aad la yaab iyo amkaag ugu riday bulshada Soomaaliyeed, kaddib markii la sheegay in xili habeen ah xaaskiisa oo jiifta uu si ula kac ah u dilay.